Isilayidi sokutyabeka iZilayidi abavelisi kunye nabanikezeli - China Powder iZilayidi iZilayidi Umzi mveliso
Uluhlu lweSilayidi seDraw
Isakhelo sobuso umgubo wekhabhathi yokutshiza ezantsi intaba yokuvala isilayidi
Intshayelelo:Isakhelo sobuso umgubo wekhabhathi yokutshiza ezantsi intaba yokuvala isilayidi. Yenziwe ngumatshini wokunyathela. Ingasetyenziselwa uhlobo lweAmerican ubuso besakhelo sekhabhathi.Umthwalo wokujikeleza malunga ne-25 KGS kunye nokuhamba ngebhayisikile ngaphezulu kwamaxesha angama-50,000. Inqaku sisilayidi sokuhambisa kunye neepads zokulinganisa, ukutyibilika ngokugudileyo ngengxolo ephantsi, umsebenzi onxulumene nokuzimela, izibini zokumisa iibhloko zokuthintela ulwakhiwo lwesilayidi. Ukusetyenziswa komphezulu kwitekhnoloji yokutshiza, engenabungozi kokusingqongileyo, anti-umhlwa esebenzayo, anti-umhlwa.
Umzekelo No .: US02A
604 Series European ezantsi ezifuna self umgubo kufutshane wawutyabeka isilayidi roller
Intshayelelo:604 Series European ezantsi ezifuna self kufutshane umgubo wawutyabeka roller isilayidi lolona hlobo ilula yesilayidi. Yenziwe ngumatshini wokunyathela. Ungayisebenzisa kulo lonke uhlobo lwefanitshala yefanitshala. Umthamo wokujikeleza i-25 KGS kunye nebhayisikile ngaphezulu kwama-50,000 amaxesha. Inqaku sisilayidi sokuhambisa kunye neepads zokulinganisa, ukutyibilika ngokugudileyo ngengxolo ephantsi, umsebenzi onxulumene nokuzimela, izibini zokumisa iibhloko zokuthintela ulwakhiwo lwesilayidi. Ukusetyenziswa komphezulu kwitekhnoloji yokutshiza, engenabungozi kokusingqongileyo, anti-umhlwa esebenzayo, anti-umhlwa.
Umzekelo No .: YA-01
I-FGV Series isezantsi intaba yokuzivalela umgubo wokuvala ipleyiti yoMzantsi Melika
Intshayelelo:I-FGV Series ezantsi intaba yokuvala umgubo wokutyabeka uMzantsi Melika iZilayidi zodidi yeyona ndlela ilula yesilayidi. Yenziwe ngumatshini wokunyathela. Ungayisebenzisa kulo lonke uhlobo lwefanitshala yefanitshala. Umthamo wokujikeleza i-25 KGS kunye nebhayisikile ngaphezulu kwama-50,000 amaxesha. Inqaku sisilayidi sokuhambisa kunye neepads zokulinganisa, ukutyibilika ngokugudileyo ngengxolo ephantsi, umsebenzi onxulumene nokuzimela, izibini zokumisa iibhloko zokuthintela ulwakhiwo lwesilayidi. Ukusetyenziswa komphezulu kwitekhnoloji yokutshiza, engenabungozi kokusingqongileyo, anti-umhlwa esebenzayo, anti-umhlwa.
Umzekelo No .: YA-02
Iipaneli zecala lesilayidi sebhokisi yesilayidi engama-86mm
Intshayelelo:Iipaneli zecala lesakhelo se-86mm ubude besilayidi yebhokisi yesinyithi lolona hlobo lulula lwedrowa. Yenziwe ngumatshini wokunyathela. Ungayisebenzisa kulo lonke uhlobo lwefanitshala yefanitshala. Umthamo wokujikeleza i-25 KGS kunye nebhayisikile ngaphezulu kwama-50,000 amaxesha. Inqaku sisilayidi sokuhambisa kunye neepads zokulinganisa, ukutyibilika ngokugudileyo ngengxolo ephantsi, umsebenzi onxulumene nokuzimela, izibini zokumisa iibhloko zokuthintela ulwakhiwo lwesilayidi. Ukusetyenziswa komphezulu kwitekhnoloji yokutshiza, engenabungozi kokusingqongileyo, anti-umhlwa esebenzayo, anti-umhlwa.
Umzekelo No .: YA-03A86
Isilayidi esenziwe ngebhokisi yentsimbi eyi-118mm (isilayidi esenziwe nge-powder)
Intshayelelo:Isilayidi sebhokisi yesinyithi ye-118mm (isilayidi esenziwe ngesoda esisilayidi) lolona hlobo lulula lwedrowa. Yenziwe ngumatshini wokunyathela. Ungayisebenzisa kulo lonke uhlobo lwefanitshala yefanitshala. Umthamo wokujikeleza i-25 KGS kunye nebhayisikile ngaphezulu kwama-50,000 amaxesha. Inqaku sisilayidi sokuhambisa kunye neepads zokulinganisa, ukutyibilika ngokugudileyo ngengxolo ephantsi, umsebenzi onxulumene nokuzimela, izibini zokumisa iibhloko zokuthintela ulwakhiwo lwesilayidi. Ukusetyenziswa komphezulu kwitekhnoloji yokutshiza, engenabungozi kokusingqongileyo, anti-umhlwa esebenzayo, anti-umhlwa.
Umzekelo No .: YA-03A118
Isilayidi sebhokisi yesinyithi eyi-150mm
Intshayelelo:Isilayidi sebhokisi yesinyithi esine-150mm yeyona ndlela ilula kakhulu yenkqubo yedrowa. Yenziwe ngumatshini wokunyathela. Ungayisebenzisa kulo lonke uhlobo lwefanitshala yefanitshala. Umthamo wokujikeleza i-25 KGS kunye nebhayisikile ngaphezulu kwama-50,000 amaxesha. Inqaku sisilayidi sokuhambisa kunye neepads zokulinganisa, ukutyibilika ngokugudileyo ngengxolo ephantsi, umsebenzi onxulumene nokuzimela, izibini zokumisa iibhloko zokuthintela ulwakhiwo lwesilayidi. Ukusetyenziswa komphezulu kwitekhnoloji yokutshiza, engenabungozi kokusingqongileyo, anti-umhlwa esebenzayo, anti-umhlwa.
Umzekelo No .: YA-03A150